XOG: Somaliland ma xarun ayey u noqonaysaa Mucaaradka Farmaajo & Kheyre, maxaase ka run ah? – Puntlandtimes
HARGEYSA(P-TIMES)- Wada hadaladii la sheegay in ay Nairobi ku dhexmareen dhawaan Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir ee mucaaradsan dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xubno katirsan Hoggaanka Somaliland waxa soo baxaya wararka sheegaya in ay dhinacyadu ku heshiiyeen si cad in loola dagaalamo dawladda Faderaalka.
Faysal Cali Waraabe oo kamid ah madaxda Mucaaradka Somaliland ayaa sheegay in ay ka wada hadleen siyaasiinta gobalada dhexe ee ay kulmeen, sidii meesha looga saari lahaa Madaxweyne Farmaajo, taas oo uusan qarsoodi ka dhigin Faysal.
Hadda, waxaa banaanka u soo baxaya warar kala duwan oo daaha ka rogaya qorshaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen, waxaana la sheegay in doorashada Soomaaliya ee 2020-ka mucaaradida ugu xooga badan ee Farmaajo iyo Kheyre ay uga imaan doonto magaalada Hargeysa.
Madaxtooyada Somaliland, waxay xooga saaraysaa in ay saameyn xoog leh ku yeelato arrimaha doorashooyinkaas, gaar ahaana xubnaha dhankeeda matali doona ayaa la sheegay in ay xubno ka socda Madaxtooyadu faragalin ku yeelan doonaan.
Somaliland wiilasha Hawiye waa dalkoodii waa Dal iris Samale markaa wax dhib ah ma leh waa ilmaadeer iska sheekaysan
lkn Isaaq taas ma’aaminsanee se wax ujiraa? kkkk Waxeey yiraahdaan Carab baan kasoo jeednaa Hawiyese weli kama maqlin ineey Carab ku abtirsadaan, ma idinkaa iska jecleeysateen in Isaaq wax idinla wadaago kkkkkk